I-Wholesale Natural soy wax flakes yokwenza amakhandlela ifektri nabakhiqizi | Winby
Ama-wax we-soy wemvelo
I-Eco-friendly, i-organic yokwenza amakhandlela
Usayizi: 500g/isikhwama 25kg/ibhokisi
I-Wholesale 100% yemvelo eco-friendly wax flakes yokwenza amakhandlela
1. Amakhandlela esoya angafakwanga iphunga avutha isikhathi eside kunewax kapharafini.
2. I-Soy wax iwuhlobo lwezinsiza ezivuselelekayo.
3. I-wax yesoya yemvelo ivutha ngokugcwele kune-wax kapharafini, ingabi nantuthu emnyama nensalela eyenza ikhaya lakho libe nekhwalithi yomoya engcono.
4. Amakhandlela e-soy awawona ubuthi, avuselelekayo futhi agaywa kabusha. Ukwengeza, ungasebenzisa kabusha i-soy wax ezitsheni zengilazi.
Igama lomkhiqizo Ama-wax we-soy wemvelo
Umbala Umbala omhlophe wobisi
Ukupakisha 500G/bag,25kg/ibhokisi, yamukela izidingo zamakhasimende
Ukusetshenziswa Ukwenza amakhandlela
Isitoreji Gcina endaweni epholile neyomile
I-MOQ 3000 ama-pcs. Ama-oda amancane angamukeleka uma sinesitoko.
Okwedlule: Ikhandlela letshe elinephunga elibalulekile lamafutha
Olandelayo: ikhandlela lobuciko GY01-GB63-58J
amakhandlela okwenza wax
Ama-Flakes Soy Wax
I-Soy Wax yemvelo
I-Soy Wax Flakes
Sinesipiliyoni seminyaka engu-20 embonini yamakhandlela, ikakhulukazi sihlinzeka ngamakhandlela anephunga elimnandi, izimbiza zamakhandlela, izibambi zamakhandlela, i-soy wax, izintambo zikakotini, izintambo zokhuni, amathuluzi e-DIY wekhandlela nezinye izinto zamakhandlela. Sinikeza insizakalo yokwenza ngokwezifiso zayo yonke imikhiqizo yethu ngokuya ngemibono yakho nokuklama.
ikhandlela elinephunga lomuntu siqu embizeni yengilazi ecacile
ingilazi ye-matte efriziwe engenalutho yesibambi sekhandlela-i-champag...
umhlanga diffuser iphunga elimnandi isethi isipho ikhandlela
TC15 10.65oz Nordic Cylindrical Ceramic tumbler...
I-TC23 – 5.6oz ikhandlela elinephunga elimnandi...